မသေခင် လည်ပတ်သွားသင့်သော ကမ္ဘာ့အလှဆုံးနေရာ ၁၀၀ – အပိုင်း ၂ - Thutazone
70. Monument Valley, Arizona-Utah Border
ဒီနေရာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနား နဲ့ utah ပြည်နယ်တွေရဲ့အစပ် ကော်လိုရာဒိုကုန်းပြင်မြင့် ဒေသမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ အများအားဖြင့် မြေပြန့်ဖြစ်ပေမယ့် ထူးခြားတာကတော့ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ သဲကျောက်ဆောင်ကြီးတွေ တည်ရှိနေတာပါ။ သဲကျောက်ဆောင်ကြီးတွေဟာ အလွန်ကြီးမားပြီး အမြင့် မီတာ ၄၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ အထိ ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရဆုံး နေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီဒေသရဲ့ အလှအပတွေကို မိုးပျံပူပေါင်းစီးကာ ကောင်းကင်ယံကနေ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကတော့ ကာရစ်ဘီယံဒေသထဲက ကျွန်းစုနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်ပြီး Hispaniola ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံငယ်လေးဟာ လှပတဲ့တောင်ကုန်းတွေ ၊ ကမ်းခြေတွေ အလွန်ပေါများတာကြောင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအလာဆုံး နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော် Santo Domingo ဟာ ဥရောပသားတွေ ကာရစ်ဘီယံဒေသကို အစောဆုံးခြေချခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေ ၊ ပြတိုက်တွေ ၊ လှပသန့်ရှင်းတဲ့ကျောက်ခင်းလမ်းတွေဟာ ဒီမြို့မှာရှိနေပါတယ်။ သာယာတဲ့ရာသီဥတုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဥရောပ နဲ့ အာဖရိက တေးဂီတ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကို ဒီနေရာမှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
68. Geirangerfjord, More og Romsdal County, Norway
fjord ဆိုတာကတော့ မတ်စောက်တဲ့ တောင်ကမ်းပါးတွေ တောင်ကုန်းတွေကြားထဲက ရှည်လျားပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ရေလက်ကြား ကိုခေါ်တာပါ။ ဒီ Geirangerfjord ကတော့ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Sunnmøre ဒေသမှာ တည်ရှိပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ အလှပဆုံး နဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအလာဆုံး နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိတဆုံး စိန်းလန်းနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး အလွန်လှပတဲ့ ရေတံခွန်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ရာမှာဖြစ်ပြီး တောင်တက်တာ ဝါသနာပါသူတွေအတွက် တောင်တက်လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဇိမ်ခံအပျော်စီးသင်္ဘောစီးတာ နဲ့ ကယက်လှေလှော်တာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
67. Tikal, Northern Guatemala
မာယာလူမျိုးတွေဟာ သူတို့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ၊ ပညာရပ်တွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ရှေးဟောင်းလူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ Tikal ကတော့ မာယာတွေရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ အလယ်အမေရိက က ဂွာတီမာလာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ Tikal မြို့မှာ ဘီစီ ၄ရာစုကနေ အေဒီ ၄ရာစုအထိ မာယာလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ပြီး မာယာတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ရေး နဲ့ စီးပွားရေး မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အေဒီ ၄ရာစုမှာတော့ Teotihuacan တွေရဲ့နယ်ချဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး အေဒီ ၁၀ ရာစုမှာတော့ စွန့်ပစ်မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာတော့ ယူနက်စကိုရဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဂွာတီမာလာ Petén Basin ဒေသက တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မာယာတို့ရဲ့အဆောက်အအုံများစွာကို တအံတသြမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
66. Copenhagen, Denmark
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အတိုးတက်ဆုံး ၊ အချမ်းသာဆုံး ၊ ရာဇဝတ်မှုအကင်းစင်ဆုံး ၊ အပျော်ရွှင်ဆုံး ၊ ပညာရေးအကောင်းဆုံး စတဲ့စတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေမှာ အမြဲလိုလို ထိပ်ပိုင်းက ပါနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒိန်းမတ်ရဲ့မြို့တော် ကိုဗင်ဟေဂင်ဟာလည်းပဲ အသန့်ရှင်းဆုံး ၊ အစိမ်းလန်းဆုံး စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းတဲ့လမ်းတွေ ၊ လှပတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ၊ တူးမြောင်းတွေရှိတဲ့မြို့ဖြစ်သလို မြို့သူမြို့သားတွေကလဲ အလွန်ဖော်ရွေတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ အဲဒီမြို့လေးကို အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကလဲ ရေထု၊ လေထုရေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကို ကာကွယ်လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများစွာကို ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေ ၊ အနုပညာပြတိုက်တွေအပြင် ညဘက်တွေမှာလည်း များပြားလှတဲ့ပွဲတော်တွေ ၊ ပါတီတွေ ၊ အခမ်းအနားတွေရှိနေပါတယ်။
65. Stone Forest, Yunnan Province, China
ဒီကျောက်သစ်တော( Shilin)ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံနယ်မြေဖြစ် တဲ့ ယူနန်နယ်က Shilin Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ဒေသမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာကို အဝေးက ကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ့်သစ်တော တစ်ခုလို့ ထင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အနီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျောက်တောင်တွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အမည်ကို ကျောက်သစ်တောလို့ ပေးထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကျောက်ဆောင်တွေရဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်း ထူးဆန်းလှပါတယ်။
အပင်၊ တိရစ္ဆာန် တွေရဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ တူတဲ့ အပြင် အချို့ကျောက်ဆောင်တွေဆို လူနဲ့တောင် တူနေပါသေးတယ်။ ဒီကျောက်သစ်တောမှာ သူရဲ့အချိုးမကျတဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေ၊ လှပတဲ့ ရေကန်တွေ၊ရှည်လျားတိတ်ဆိတ်တဲ့ ဂူတွေ နဲ့ သာယာတဲ့ရေတံခွန်တွေများစွာရှိပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ ယူနက်စကိုရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခု အဖြစ် ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
64. Westminster Palace, England, United Kingdom
ဝက်စ်မင်းစတာနန်းတော်ကတော့ လန်ဒန်မြို့အလယ်ပိုင်း သိမ်းမြစ်မြောက်ဘက်မြစ်ကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ အနီးမှာရှိတဲ့ ဝက်စ်မင်းစတာ ဘုရားကျောင်းကို အစွဲပြုပြီး ဝက်စ်မင်းစတာ နန်းတော်လို့ ခေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလအဆောက်အအုံကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်ဘုရင်စံမြန်းခဲ့သော နန်းတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၁၂ ခုနှစ်တွင် နန်းတော်ကို မီအကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းသောကြောင့် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ပြီးနောက် မီးထပ်လောင်ခံရသလို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလည်း ဂျာမန်တို့ရဲ့ ဗုံးဒဏ်ထိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၈ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့မြေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားပြီး အဓိကတာဝါ ၃ခု ပါရှိပါတယ်။ Gothic စတိုင် ဗိသုကာလက်ရာဖြစ်ပြီး ဗိသုကာပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ Charles Barry နဲ့ Augustus Pugin တို့က ၁၈၄၀ ကနေ ၁၈၇၆ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတော်ရှိ အယ်လစ်ဇဘက်မျှော်စင် ခေါ် ဘစ်ဘန် (Big Ben) နာရီစင်ဟာ အလွန်ကျော်ကြားပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာတော့ ယူနက်စကိုရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
63. Arches National Park, Eastern Utah
အမေရိကန် Utah ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဥယျာဉ်နယ်မြေ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပေါင်းကူး အခုံးတွေကို အစွဲပြုပြီး Arches လို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုင် ၁၂၀ နီးပါးကျယ်ဝန်းတဲ့ ဒီဥယျာဉ်နယ်မြေမှာ သဘာ၀ ပေါင်းကူး အခုံးပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်တောင်ရှိနေပါတယ်။
အခုံးတွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Moab မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ Delicate Arch ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ သဘာဝပေါင်းကူး အခုံးဟာ အမြင့် ၅၂ပေရှိပြီး ဒီနယ်မြေရဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရဆုံးဖြစ်သလို စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းမှာလည်း ထည့်သွင်းရိုက်နှိပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဒီဥယျာဉ်နယ်မြေရဲ့ အလှအပကို ကားနဲ့ပတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာရဲ့ ညဘက်ကောင်းကင်ပြင် နဲ့ နေဝင်ချိန်တွေကို ကြည့်ခြင်းတွေဟာ အလွန်ရေပန်းစားလှပါတယ်။
62. Sydney, Australia
ဆစ်ဒနီကတော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံ နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီဟာ အလွန်လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေ ၊ စုံလင်လှတဲ့ ပြတိုက်ပြခန်းတွေ ၊ ကဇာတ်ရုံတွေ ၊ ပန်းခြံတွေ ၊ အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ခေတ်မီတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဆစ်ဒနီလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ လူသိအများဆုံးအရာက ဆစ်ဒနီအော်ပရာ ကဇာတ်ရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်တည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးကြီးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် အခမ်းအနားပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်ကို လက်ခံကျင်းပလျှက်ရှိတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီရဲ့ကမ်းခြေတွေမှာ ရွက်လှေစီးခြင်း ၊ လှိုင်းစီးခြင်း(surf) ၊ ရေငုပ်ခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလှဆုံးကမ်းခြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာကတော့ Bondi ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။
61. Giant’s Causeway, Antrim, Northern Ireland
Giant’s Causeway လို့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဒီနေရာဟာ အိုင်ယာလန် Bushmills မြို့ရဲ့ မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ရဲ့ အံ့ဖွယ်သဘာဝနေရာတွေထဲက ၄ခုမြောက်နေရာဖြစ်ပြီး UNSECO ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဆဌဂံပျားအုံကွက်ပုံစံရှိတဲ့ ကျောက်တိုင်တွေဟာ လူတွေဖန်တီးထားသလို ညီညာစွာ ရှိနေတာပါပဲ။
ဒီနေရာဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သန်း၅၀ခန့် က ကြီးမားတဲ့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးကျောက်တိုင်ဟာ ၃၉ပေ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ တော့ သဘာဝရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့် ဒီနေရာဟာ အိုင်ယာလန်ရဲ့ အစွဲဆောင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားပေါင်းများစွာဟာ ဒီကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း အပန်းဖြေလေ့ရှိကြပါတယ်။